kunming.cn - ကောက်ညင်းထုတ်ပွဲတော်တွင် ယူနန်ပြည်နယ်သို့ ပန်းအမျိုးမျိုး ရှုစားလာပါ
ကောက်ညင်းထုတ်ပွဲတော်တွင် ယူနန်ပြည်နယ်သို့ ပန်းအမျိုးမျိုး ရှုစားလာပါ
2020-06-24 17:44 ရောင်စုံတိမ်တံတား
(ရောင်စုံတိမ်တံတား၊ လဲ့ရွှေရည်) ကောက်ညင်းထုတ်ပွဲတော် ရုံးပိတ်ရက်များသည် ရောက်လာတော့မည်၊ ယူနန်ပြည်နယ်၌ ပန်းအမျိုးမျိုး ပွင့်ဖူးနေ၍ ရုံးပိတ်ရက်အတွင်း မိတ်ဆွေများ၊ ဆွေမျိုးများနှင့် အတူတူ ရှုစားလာပါ။
ကူမင်းမြို့ သကွမ်းတန်ဆောင်းဥယျာဉ် ၁၆ ကြိမ်မြောက် ကြာပန်းပြပွဲကို ဇွန်လ ၂၅ ရက်နေ့ ကောက်ညင်းထုတ်ပွဲတော်တွင် ကျင်းပ၍ ဤပြပွဲကျင်းပရာတွင် ရေကန်စိုက်ကြာပန်း အမို ၁၆၀ ကျော်၊ ရေအိုးစိုက်ကြာပန်း အအိုး ၆၀၀၀ ကျော်၊ ကြာပန်း အမျိုး ၃၀၀ ခန့်နှင့် အခြားရေနေပန်း အအိုး ၁၀၀၀ကျော်၊ အကျယ်အဝန်း အမို ၄၀ ကျော် ရှိပြီး ခရီးသည်များနှင့် တွေ့ဆုံ၍ ကြာပုဏ္ဏရိတ်ပန်း၊ Victoria regia Lindl၊ Pontederia cordata L.၊ Thalia dealbata Fraser၊ ဗုဒ္ဓသရဏံပန်း စသည့် အမျိုးများ ပါဝင်မည်။ ထို့ပြင်၊ သကွမ်းတန်ဆောင်းသည် ကြိုးကြာဝါတန်ဆောင်း၊ ယွဲ့ယန်တန်ဆောင်း၊ ဖန်လိုင်တန်ဆောင်း၊ ကွန့်ချွက်တန်ဆောင်း စသည့် တစ်နိုင်ငံလုံး သမိုင်းဝင်ယဉ်းကျေးမှု ကျော်ကြားသည့် တန်ဆောင်း ၁၈ ခုနှင့် ကောက်ညင်းထုတ်ပွဲတော်၏ ည ၁၉ နာရီတွင် တရုတ်နာမည်ကျော်တန်ဆောင်းများ အတူတူ ထွန်းလင်းစေ၍ နိုင်ငံတော် ငြိမ်းချမ်းသာယာပြီး ပြည်သူလူထု ပျော်ရွှင်စေရန် ဆုတောင်းမည်။
တစ်နှစ် ဇွန်လ၊ ဇူလိုင်လ၊ သြဂုတ်လတို့သည် ကြာပန်းများ ဝေဝေဆာဆာ ပွင့်ဖူးသည့် ရာသီ ဖြစ်ပါသည်၊ ဖူဇယ်ဟင်းမှ ကြာပန်းများသည် ဝေဝေဆာဆာ ပွင့်ဖူးနေ၍ မြစိမ်းရောင် ဖြစ်သော ကြာဖက်အကြား ပန်းရောင်၊ အဖြူရောင် ဖြစ်သည့် ကြာပန်းများသည် အလှဆင်ထား၍ ဝေးရပ်မှ တောင်တန်း၊ တိမ်ဖြူနှင့် လှပသော ပန်းချီတစ်ချပ် အတူတူ ဖြစ်လာပါသည်။
ယခုတလော ယူနန်ပြည်နယ် ဟုန်းဟေး ဟာနီလူမျိုးနှင့် ယီလူမျိုး ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ပြည်နယ်ခွဲ မီးလေ့မြို့ ဇူယွန်မြို့နယ်တွင် အမို သောင်းကျော် စိုက်ပျိုးနေသည့် ကြာပန်းများသည် ဝေဝေဆာဆာ ဖူးပွင့်နေ၍ Anastomus oscitans များသည် ကြာပန်းများထဲတွင် ခပ်ကြော့ကြော့နှင့် ကခုန်နေပါသည်၊ ပန်းချီကား တစ်ချပ်သဲ့သို့ပင် ဖြစ်ပါသည်။ ဇူယွန်မြို့နယ်တွင် ကြာစွယ်စိုက်ပျိုးသည့် သမိုင်းသည် နှစ်ပေါင်း တစ်ရာကျော် ရှိပါသည်၊ ကြာပန်းများ ဝေဝေဆာဆာ ဖူးပွင့်ခြင်းနှင့် Anastomus oscitans များ ခပ်ကြော့ကြော့ ကခုန်ခြင်းတို့သည် သာယာလှပသော ကျေးလက်တောရွာရှုခင်းကို ဖြစ်ပေါ် စေလာပါသည်။
ကျောက်ဇီဆီးနှင်းတောင်၏ အဓိကတောင်ထွတ်သည် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ထက် ၄၂၂၃ မီတာ ရှိပြီး နှိုင်းရအမြင့်ဒီဂရီ မီတာ ၃၀၀၀ ခန့် ရှိ၍ ထူးခြားရှိသည့် မြေပြင်လက္ခဏာနှင့် စတီရာသီဥတု တို့သည် တိမ်ပြင်၊ နေထီးဆောင်း၊ နေထွက်ခြင်း၊ ဆင်းနှင်း၊ ဇလပ်နီပန်းများ ရှုခင်းကို ဖြစ်လာ စေပါသည်။ ဇွန်လမှာ လူတွေသည် စွဲလမ်းမိ စေပါသည်။ ကျောက်ဇီဆီးနှင်းတောင်၌ ဇလပ်နီပန်းများနှင့် တောရိုင်းပန်း အမျိုးမျိုးတို့သည် နေရာအနှံ့ ပွင့်ဖူးနေပါသည်။ ဤအချိန်ကာလသည်လည်း ငှက်များ၏ ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော ပွဲတော်လည်း ဖြစ်၍ ငှက်မျိုးနှစ်သက်သူများသည် အနှစ်သက်ဆုံးသော ငှက်ရိုက်သည့် အကောင်းဆုံး အချိန်ကာလ ဖြစ်ပါသည်။
တစ်နှစ် မေလ၊ ဇွန်လ နွေဦးရာသီကုန်မှ နွေရာသီဆန်းအထိ စန်းတောင်မှ ဇလပ်နီပန်းများကို ရှုစားရန် အကောင်းဆုံးသော အချိန်ကာလ ဖြစ်ပါသည်၊ စန်းတောင် ရှီမာကန်တစ်လျှောက် ပန်းများ ဝေဝေဆာဆာ ပွင့်ဖူးပါသည်။ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ထက် မီတာ ၃၉၀၀ ရှိ၍ နိမ့်သော Rhododendron lapponicum（L.）Wahl. များသည် ဤဒေသ၌ ဝေဝေဆာဆာ ပွင့်ဖူး၍ တောင်ကြားရေမြောင်း တစ်ခုလုံးသည် နတ်ပြည်ကဲသို့ အလှဆင်ထားပါသည်။
ကောက်ညင်းထုတ်ပွဲတော် မတိုင်မီနှင့် ကုန်ဆုံးသည့် ရက်များအတွင်း လောင်ကျွင်းတောင် ကျုပ်စီကျုပ်ရေကန်၌ ဇလပ်နီပန်းများ ဝေဝေဆာဆာ ပွင့်ဖူးပါသည်၊ ဤနေရာ၌ ဇလပ်နီပန်း အမျိုး ၁၀၀ ခန့် ရှိ၍ မတ်လမှ ဇူလိုင်လအထိ ရှေ့စဉ်နောက်ဆက် ပွင့်ဖူး၍ အနီရောင်၊ အဝါရောင်၊ အဖြူရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ ပန်းရောင် စသည့် အရောင်းအမျိုးမျိုး ဖြစ်သည့် Rhododendron lapponicum（L.）Wahl. များသည် ယှဉ်ပြိုင်စွာ ပွင့်ဖူး၍ လောင်ကျွင်းတောင် ကျုပ်စီကျုပ်ရေကန်ကို အလှဆင်ထားပါသည်။ တစ်နှစ် ကောက်ညင်းထုတ်ပွဲတော်တွင် ဘိုင်လူမျိုး၊ ယီလူမျိုး၊ လီဆူလူမျိုး၊ ပူမီလူမျိုး၊ နာဆီလူမျိုး တို့သည် ရေကန်ဘေးသို့ စုဝေးလာရောက်၍ အချီအချတေးဆိုပြီး အကက၍ လူများများရှိပြီး ဒေသခံ ချစ်သူများနေ့အဖြစ် ခေါ်ပေးပါသည်။
Primula malacoides Franch. များသည် ကောက်ညင်းထုတ်ပွဲတော် မတိုင်မီနှင့် ကုန်ဆုံးသည့် ရက်များအတွင်း များများပွင့်ဖူး သောကြောင့် လူကူးကန် နောက်ကျောဘက်မှ မုတီကျင်းစားကျက်မြေ၌ နေထိုင်သည့် ပူမီလူမျိုးသည် ဤပန်းမျိုးကို ကောက်ညင်းထုတ်ပွဲတော်ပန်း ဟုခေါ်ပါသည်၊ တစ်နှစ် ကောက်ညင်းထုတ်ပွဲတော်တွင် သူတို့သည် ကောက်ညင်းထုတ်ပွဲတော်ပန်း တစ်ချို့ကို ဆွတ်ခူး၍ တံခါးပေါ်တွင် ချိတ်ဆွဲထား လျက်ရှိသည်။ နီသော ပန်းများသည် လေယူရာ ယိမ်းနွဲ့လှုပ်ရှား၍ ၎င်းအကြား အေးအေးဆေးဆေး စိမ်ပြေနပြေနှင့် လမ်းလျှောက်သည့် နွားများ၊ ဆိတ်များနှင့် ဝေးရပ်မှ ကျေးရွာ၊ မြစ် တို့သည် စိတ်အေးသက်သာသော ကျေးလက်ရှုခင်းပန်းချီကို အတူတူ ဖွဲ့စည်းပါသည်။ စာရင်းကောက်ခြင်း အရ မုတီကျင်းစားကျက်မြေ၌ Primula malacoides Franch. အမျိုး ၃၀ ကျော် ရှိပါသည်။
ယူနန်ပြည်နယ် ဟုန်းဟေး ဟာနီလူမျိုးနှင့် ယီလူမျိုး ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ပြည်နယ်ခွဲ မိန်းဇိမြို့တွင် စိန်ပန်းများသည် အပင်သောင်းနှင့်ချီပြီး ယှဉ်ပြိုင်၍ ဖူးပွင့် နေပါသည်၊ ရွှန်းတင့်ဝေဆာ လှပါသည်။ နီရဲရဲသော စိန်ပန်းနှင့် မြို့ပြ အဆောက်အအုံများသည် ရောပြွမ်းပြီး ရောင်ပြန်ဟပ်၍ လှပထည်ဝါသော၊ ထွန်းလင်းတောက်ပသော ရှုခင်းရှုကွက် ဖြစ်လာ နေပါသည်။
မုန်လျန်ခရိုင်သည် ယူနန်ပြည်နယ် အနောက်တောင်ပိုင်း၌ တည်ရှိနေပြီး အနောက်ဘက်နှင့် တောင်ဘက်တို့သည် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် နယ်နိမိတ်ချင်းဆက်စပ်၍ ခရိုင်ထဲတွင် ရုက္ခပင်များ ဝေဝေဆာဆာရှိပြီး ဇီဝလက္ခဏာ ကောင်းမွန်ထူးကဲ၍ “နယ်ခြားဒေသ မြကျောက်”ဟူသော နာမည်ကောင်း ရှိပါသည်။ မေလမှ မုန်လျန်၌ စိန်ပန်း တစ်ပင်ပင်များသည် ဝေဝေဆာဆာ ပွင့်ဖူးနေ၍ နီရဲရဲသော ပန်းပွင့်များသည် ဝိုင်းဝိုင်းရုံးစုပြီး မုန်လျန်၏ လမ်းကြီးလမ်းငယ်များကို ဆင်ယင်စွမ်းမံထား၍ “နယ်ခြားဒေသ မြကျောက်” ဟု တင်စားခေါ်ဝေါ်ထားသည့် မုန်လျန်ခရိုင်အတွက် ရွှန်းတင့်တောက်ပသော အရောင်းအဆင်း တစ်မျိုး တိုးဖြည့်ပေးပါသည်။
2020年06月24日 17:44 云报客户端